Disney plus ma leedahay Harry Potter? - LifeBytes | LifeBytes
Encarni Arcoya | 29/05/2022 20:27 | La cusbooneysiiyay 31/05/2022 08:37 | Madadaalo
Iyada oo aad u badan oo taxane ah iyo goobaha filimada in aan leenahay waa lama huraan in aan lumino meesha lagu daawado qaar ka mid ah filimada aan jecelnahay. Matoorada raadinta waxaa badanaa ka buuxa su'aalo ku saabsan haddii Disney Plus leedahay Harry Potter, ama haddii aan daawan karno xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ee Doctor Who on Netflix.
Haddii aad ka mid tahay kuwa raadinaya filimada Harry Potter oo aad la yaabban tahay haddii Disney Plus ay haysato, halkan waxaad ka heli doontaa jawaabta. Inkastoo laga yaabo inaadan jeclayn.
1 Disney Plus: buug noocee ah ayuu hayaa?
2 Disney Plus ma leedahay Harry Potter?
3 Harry Potter mustaqbalka ma joogi doonaa Disney Plus?
4 Halkee kale oo aad ka arki kartaa Harry Potter?
5 Maxaa dheeraad ah oo aad ka heli kartaa HBO Max
6 Filimada sida Harry Potter
Disney Plus: buug noocee ah ayuu hayaa?
Disney Plus waa goob gudaha ah oo aad ka heli karto dahabyo waaweynhadda iyo horeba. Waxaa laga yaabaa, oo ay la socoto Netflix, midka leh qaybaha ugu badan oo kuu ogolaanaya inaad daawato kartoonnada laakiin sidoo kale filimo iyo noocyo kale.
Markii hore, sababta oo ah magaca, waxaa loo maleeyay in ay noqon doonto oo kaliya carruurta. laakiin runtu waxay tahay in uu leeyahay wax badan. Tusaale ahaan, laba qaybood oo muhiim ah waa Marvel iyo Star Wars. Iyaga oo kaliya ayuu awood u yeeshay inuu ku daro filimaan badan, taxane iyo dukumentiyo ah oo daboolaya daawadeyaal badan, iyo bandhigiisa hore wuxuu keenaa xiiso badan.
Tan waxa aad haysaa dhokumentiyo, sida kuwa National Geographic iyo kuwa kale oo soo jiidanaya in ay fuliyaan dadka caanka ah.
Waxoogaa yar, waxa ay ku kordhinaysaa wax badan oo dheeraad ah buug-yaraha, oo ay la socoto barnaamijka Xiddiga ee ku jira gudaha Disney. Markaa, hadda waxaad ku raaxaysanaysaa:
Dhamaan waxyaabaha Disneyfilimaan, taxane, surwaal gaaban oo firfircoon, oo ay ku jiraan Simpsons-ka.
Pixar: iyada oo filimadeeda ay markii hore la tartamayeen Disney oo hadda qayb ka ah.
yaabina: oo wata filimaan, musalsalka iyo Documentary-ga sida loo sameeyay.
Star Wars: sidoo kale leh taxane iyo filimaan.
Qaranka Juquraafi: oo wata documentary.
StarHalkan waxaad ka heli doontaa filimaan iyo taxane labadaba daawadayaasha qaangaarka ah.
Xaqiiqdu waxay tahay in haddii aad iska diiwaan gelisay Disney Plus oo aad rabto inaad aragto filimada Harry Potter Waan ka xunnahay inaan kuu sheegno inaysan suurtagal ahayn. Disney kuma jiraan filimadaas buuggeeda, horena uguma lahayn., maadaama kaliya lagu arki karo Amazon Prime iyo, qaar, Netflix. Dhab ahaantii, kuma sii jiraan aaladahan midkoodna (Amazon Prime waxay kuu oggolaan kartaa inaad kireysato ama iibsato mid).
Hadda, Xaqiiqdu waxay tahay in dhammaan filimada Harry Potter, Sheekada oo dhan, oo ay ku jiraan labada xayawaan ee Fantastic iyo halka laga helo waxa lagu xareeyay buuga HBO Max. Si aad u aragto, waa inaad tagtaa goobtan oo aad rukunto.
Harry Potter mustaqbalka ma joogi doonaa Disney Plus?
Waxaan ka bilaabeynaa aasaaska oo aadan weligaa ogeyn. Laakiin maanta, Dhammaan filimada Warner waxaa iska leh HBO Max oo halkaas oo keliya ayaa aad awoodi doontaa inaad daawato. Marka, haddii aan diiradda saarno xogta hadda jirta, runtu waxay tahay inaysan aad u dhicin in Disney Plus ay mustaqbalka hesho xuquuqda Harry Potter. Taas macnaheedu maaha in aanay dhici karin, laakiin hadda ma aannu aragno inay suurtogal tahay.
Halkee kale oo aad ka arki kartaa Harry Potter?
Kahor intaanan kuu sheegin in dhammaan sheekada Harry Potter ay saaran tahay HBO Max, laakiin dhab ahaantii waxaa jira meelo badan oo aad ku arki karto. Waanu kuu liis gareynaynaa haddii ay dhacdo inaadan rukhsad ku lahayn goobtan:
Play Store: Halkan waxaad ka iibsan kartaa dhammaan filimada, inkastoo ay qaali tahay.
Apple: Waxaad ku kiraysan kartaa qiimo go'an, inkastoo aysan wada lahayn dhammaan filimada.
YoutubeYoutube-ka labadiinaba waad kireyn kartaa oo iibsan kartaan.
Amazon: Daabacaadda ururiyaha oo wata 8-da fiidyow ee filimada iyo xoogaa dheeraad ah. Haddii aadan haysan HBO Max oo aad jeceshahay filimadan, waxaa laga yaabaa inay tahay ikhtiyaarka ugu jaban.
Maxaa dheeraad ah oo aad ka heli kartaa HBO Max
Haddii ugu dambeyntii aad go'aansato inaad hesho HBO Max waa in aad ogaataa in aad yeelan doonto dheeraad ah oo aanay ku siin madal kale, waana wax ay taageerayaashu runtii jeclaan karaan.
EJanaayo 1, 2022, dokumentiga Harry Potter ayaa la sii daayayKu soo noqo Hogwarts oo ah kulan sanadguuradii 20-aad ee ka soo wareegtay markii la aas aasay ay ka soo qeyb galeen qaar badan oo ka mid ah jilayaasha fanka, waxayna si naxariis leh u soo bandhigeen qaar ka mid ah siraha jilayaasha iyo filimka oo aan la ogeyn.
Markaa ka sokow filimada, waxaad yeelan doontaa hal dukumeenti dheeraad ah si aad u aragto sida jilayaasha ay isu beddeleen iyo wax kasta oo aan laga aqoon filimka.
Filimada sida Harry Potter
In kasta oo Disney Plus aysan lahayn Harry Potter, taasi macnaheedu maaha inaysan haysan filimaan ka hor imaan kara saaxirnimada. Dhab ahaantii, waxaan ku talinaynaa dhowr:
Xaaladdan oo kale Sixiroole maaha, laakiin waa ilaah, sidaas darteed waa inuu tabobbaro oo bartaa, sidaas darteed waxaan ku noolaan doonaa tacaburkooda xerada tababarka ilaahyada iyo makhluuqa sixirka.
waxaa jira laba filim oo keliya, Sheekadii way istaagtay laakiin waxaa jira buugaag ku sii socda hal-abuurnimada hal-abuurkan iyo saaxiibbadiis.
Haddii aad la kortay amiiradaha Disney iyo "sixirayaashooda xun" waxaad hubaal ahaan doontaa inaad jeceshay sheekadan. Dhab ahaantii waa qalloocan ee classics, oo leh carruurta amiiradaha iyo kuwa aad u xun.
Kuwa aad ka heli doonto waxaa ka mid ah wiilka Cruella de Vi, gabadha Maleficent, wiilka Jacfar ama gabadha boqoradda xun ee Snow White, Grimelda ama Grimhilde. Dabcan, waxaa sidoo kale jiri doona qaar ka mid ah kuwa wanaagsan, iyo marka ay ka hadlaan marxalad ka baxsan sheeko-xariiri waxay noqdaan kuwo macquul ah.
Kani maaha filim si fiican loo yaqaan, laakiin runtu waxay tahay inuu sidoo kale yahay sixir. Halkaas waxaan ka heleynaa jilaa ah oo gala Akademiyada Sage ee Tababarka Sixirka. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo ay ugu wacan tahay xasillooni darrada, gabadha waxaa loo qoondeeyey fasal "sixir-celin".
Hadda oo aad ogtahay in Disney Plus ay leedahay Harry Potter, waxa ku xiga ee aad isweydiin karto ayaa ah inay mudan tahay inaad haysato HBO Max. Buug-gacmeedkeedu weli ma dhammaystirna, laakiin runtu waxay tahay in aanay ahayn mid ka mid ah dhufto ee ugu qaalisan oo dhawaanahan waxay samaysay dalabyo badan oo qiimo leh (lahaanshaha weligeed qiimaha nuska ah, tusaale ahaan), taas oo lagu celin karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Madadaalo » Disney plus ma leedahay Harry Potter?
Sidee lagu ogaan karaa haddii aan gudbiyay aragtida